Thursday June 15, 2017 - 22:57:02 in Articles by Super Admin
23-kii April 2017,Saacadu markeey aheyd 10:30-kii fiidnimo ayey kulan albaabadda u xiran yeesheen guddi ay magacaawdeen Farmaajo iyo Kheyre ,iyadoo kullanka uu ka qeybgalay Fahad Yaasiin Xaaji Dahir. Kulanka ayaa lagu dejiyay qorshe nuxurkiisu yahay
23-kii April 2017,Saacadu markeey aheyd 10:30-kii fiidnimo ayey kulan albaabadda u xiran yeesheen guddi ay magacaawdeen Farmaajo iyo Kheyre ,iyadoo kullanka uu ka qeybgalay Fahad Yaasiin Xaaji Dahir. Kulanka ayaa lagu dejiyay qorshe nuxurkiisu yahay sidii lagu wiiqi lahaay awoodda Habargidir iyo Abgaal si gacantooda looga bixiyo gobolka Banaadir .
Guddigga la magacaabay ayaa qorshahii u gudbiyay Kheyre iyo Farmaajo laakiin markeey ka doodeen waxeey go’aansadeen in la kala hormariyo,waxeeyna isku raaceen in Habargidir la hormariyo sidoo kalena lagu soo daro kulanka Gudoomiyaha gobolka Banaadir Mr Taabit Cabdi.
Markii Mr Taabit Cabdi lagu soo deray ayaa loo bandhigay qorshaha waxaana loo sheegay iney bartilmaameedsanayaan sidii beesha Habargidir loogu sameeyn lahaay Xilka dhigis,hubka dhigis, dhaqaale ka dhigis iyo dhul ka dhigis.
Mr Taabit Cabdi ayaa aad u soo dhaweeyay qorshahaas kadibna waxaa la kala qeeybsaday hoowlaha.
1- Mr Farmaajo wuxuu codsaday inaan isagga lagu soo derin qprshe hoowleedka,wuxuu walaac ka muujiyay beelaha Daarood qaarkood oo aan sirtiisa xafidi karin.
2- Fahad Yaasiin Xaaji Dahir ayaa loo xilsaaray inuu Al-Shabaab iyo beesha Daarood iyo Xildhibaanadooda ka soo iibiyo qorshaha loo degay Habargidir .waxaana loo xilsaaray inuu Al-Shabaab ka dhaadhiciyo sidii loo bartilmaameedsan lahaay ganacsiyadda Habargidir, Xildhibaanadooda iyo ergaddii soo dooratay.
3- Ra’isulwasaare Kheyre ayaa isagga sheegay inuu qorshaha ka dhaadhacsiin karo beesha Caalamka, Murusade iyo Xawaadle.
4- Gudoomiye Taabit Cabdi ayaa isaggana sheegay inuu ka adag yahay Abgaal ,sidaas darteedna uu qorshaha ka soo iibin doono.
Afarta Masuul waxeey isku raaceen dhinaca kale in Xildhibaanadda Habargidir kuwa ugu galaangalka badan lagu furo dacaayad,waxeeyna hoowlahaas u magacaabeen Xildhibaan Mustaf Dhuxulow iyo Xildhibaan CabdiShakuur Cali Mire ,iyadoo la siiyay lacagtii dacaayadda ee adeegsigga Warbaahinta.
Xildhibaanadda bartilmaameedka Habargidir in laga dhigto la go’aansaday waxeey kala yihiin , 1- Axmed Macalin Fiqi, 2- Mahad Salad, 3, Abshir Bukhaari, 4 Saabir Nur Lugeey, 5 Cabdiraxmaan Odowaa.
Ra’isulwasaare Kheyre ayaa xiriir la sameeyay beesha Caalamka ,wuxuuna Ergayga Qaramadda Midoobay Mr Keating u sheegay iney Xildhibaanadda beesha Habargidir wadaan qalalaase iyo qas ,isagoo tilmaamay iney Dowladnimadda hor taagan yihiin Habargidir 27 sano iyo ka badan.
Ra’isulwasaare Kheyre wuxuu ka codsaday Mr Keating in Qaramadda Midoobay soo saarto liiska Xildhibaanadda shanta ah ee Habargidir loona aqoonsado Qaswadayaal ka soo horjeeda Dowladnimadda.
Amb Keating ayaa qorshahii la hor tegay Safiiradda beesha Caalamka, waxaa madashii hadalka qaatay Safiirka Ethiopia u fadhiya Somalia Mr Kamaladuun oo sheegay iney Habargidir ku tahay halis xasiloonidda,wuxuuna ka soo sheekeeyay ilaa Maxaakiimtii waxeey sameeyeen.
Amb Kamaaludiin wuxuu u dhashay beesha Hawiye Karinle ee Murusade ay walaalo yihiin,waana ninkii hubka dhigista Habargidir ku sameeyay xilligii Cabdullahi Yusuf iyadoo hubkii uu suuqa Bakaaro ka soo aruurshay loo qaaday Puntland.
Safiirka Mareykanka u fadhiya Somalia ayaa madasha ka istaagay,wuxuuna codsaday in la joojiyo dacaayadda nuucaasa,,wuxuuna Safiirka yiri "Colaaddii qabiiladda Somalia u dhaxeeysay ayaa ii muuqato,annagu dalka waa ka warqabnaa,sidaas darteed ma rabno inaan arrimaha qabiiladda u dhaxeeya dhexgalno.
Inta badan Safiiradda Reer Galbeedka ayaa ku raacay taladiisa,waxeeyna sheegeen ineysan aqbaleeyn u kala hiilinta qabiiladda Soomaaliyeed.
Ra’isulwasaare Kheyre wuxuu ku guuleeystay inuu beeshiisa Murusade qaar ka mida ka iibiyo qadiyadda sidoo kalena beesha Xawaadle wuxuu ka helay Sanbaloolshe oo la qaatay qadiyadiisa colaadinta Habargidir.
Gudoomiye Taabit Cabdi ayaa kullan la qaatay Labadda Wasiir ee beesha Abgaal Cismaan ,Wasiirka Amnigga Mr Ducaale iyo Wasiirka Warfaafinta Mr Yariisow.
Wasiirka Amnigga ayaa diiday qorshaha Taabit,wuxuuna sheegay in Habargidir yihiin awoodda beesha Hiraab sidaas darteedna aysan qaadan karin in si gaara loo colaadiyo.
Wasiirka Warfaafinta Mr Yariisow ayaa aqbalay qorshaha ku saabsan in Habargidir la colaadiyo .
Fahad Yaasiin Xaaji Dahir ayaa la kulmay xubna ka tirsan beesha Daarood laakiin kalama kulmin soo dhaweeyn wanaagsan marka laga reebo shaqsiyaad u dhashay beesha Mareexaan.
Safiiradda Reer Galbeedka ayaa markii dambe u yeeray Xildhibaano ka tirsan beesha Habargidir ,waxeeyna u sheegeen qorshaha uu wato Ra’isulwasaare Kheyre iyo moowqifka ay ka qaateen.
Sheekaddii ayaa suuqa gashay iyadoo xiisadii ugu xumeeyd ka dhalatay laakiin weli Farmaajo iyo Kheyre waxeey dagaal ugu jiraan iney Habargidir iyo Abgaal hubka dhigis ku sameeyaan laakiin Wasiirka AmniggaXildhibaan Ducaale ayaa diidan qorshaha ay wataan.
Ra’isulwasaare Kheyre wuxuu doonayaa inuu shaqadda ka eryo Wasiirka Amnigga laakiin taas lafteeda waxaa hor taagan caqabado badan.
Ra’isulwasaare Kheyre wuxuu galay musuqmaasuq xoogan mudadii uu joogay Xafiiska laakiin isagga ma ogga iney Xildhibaano badan dabba joogaan oo Mooshinkiisa la diyaariyay laguna lifaaqay dhamaan waxyaabaha lagu heeysto ee cadeeynta leh.
Sikastaba ha ahaatee, Kulanka baarlamaanka wuxuu dib u furmayaa 5 July 2017 ,waxaana Ra’isulwasaare Kheyre laga diyaariyay mooshin xilka looga tuuri doono bisha Augusto iyadoo haddii xaaladda wax iska bedeli waayana bisha February 2018 guud ahaan la riddi doono Madaxweyne Farmaajo.
Fiiro gaara: Warbixintaan waxaan ka soo turjunay Warbixin Sirdoonka reer Galbeedka qoreen oo English ku qoran sidaas darteed waxaan ka gaabsanay inaan guud ahaan xusno xigashooyinka xogtaan maadama ay xasaasi tahay xaalad amaan darteed.
Waxaa turjumay Dahir Alasow